DF oo qiratay in lacagihii deeqaha ahaa laga jaray | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo qiratay in lacagihii deeqaha ahaa laga jaray
Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo horay u sheegay in aan lacagihii deeqda ahaa laga goosan, ayaa hadda qiray in lacagahaasi laga goostay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Wasaaradda maaliyadda xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ka qeyb galayay shir lagu qabanayay aaladda fogaan aragga ee Zoom -ka ayaa si cad u sheegay in lacagihii deeqda ahaa ee dowladda lagu kabi jiray la goostay!
Waxa uu sheegay in lacago ay siiyeen waddamada Sacuudiga iyo Qatar ay u isticmaalaan bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda, waxa uuna ka deyriyay xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan isagoo ku tilmaamay in ay sagxadda soo taabteen, oo uu ula jeedo waxba ma hayno gabi ahaanba!
"Bishii Agoosto sanadkii 2020 ayaa lacagihii deeqda ahaa laga goostay dowladda Soomaaliya" ayuu yiri wasiir Bayle, waxa uuna sii raaciyay in ilaa Disembar 2020 ay isku celcelinayeen lacagaahi ka yimid waddamada Sacuudiga iyo Qadar, balse Janaayo 2021 ilaa iyo xilligan waxaan fadhinaa sagxadda oo wax lacag ah ma hayno, waxaan dooneynaa in Soomaalidu maalgashato dowladdooda ayuu sii raaciyay isagoo lacago in loo soo uruuriyo ka doonaya shacabka Soomaaliyeed.
Sababta keentay in la goosto lacagahaasi ayaa lagu sheegay in muddo xileedka madaxda dowladda uu dhamaaday, muranka siyaasadeed hareeyay doorashadii afartii sanaba mar la qaban jiray oo meesha ka baxday iyo ugu dambeyn arrinta muddo kororsiga oo adduunka oo dhan uu ka hor yimid, maadaama ay baal marsantahay sharciga.